Cardi B ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေစဉ်အတွင်း စတိတ်ပေါ်တက်၍ သူနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့အတွက် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ Offset – SoShwe
Home/Entertainment/Cardi B ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေစဉ်အတွင်း စတိတ်ပေါ်တက်၍ သူနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့အတွက် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ Offset
Cardi B ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေစဉ်အတွင်း စတိတ်ပေါ်တက်၍ သူနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့အတွက် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ Offset
admin December 18, 2018	Entertainment Leaveacomment
Offset ဟာ Cardi B ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေစဉ်အတွင်း စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ဒရာမာဆန်ဆန်ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Cardi B ဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Offset က သူမနောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကို သိရှိပြီးနောက်ပိုင်း Offset နဲ့ ကွာရှင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း Offset အနေနဲ့ ကွာရှင်းတဲ့ကိစ္စရပ်ကိုတော့ အတည်ပြုပြောကြားထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ Instagram မှာ Cardi B ကို သတိရတဲ့အကြောင်းကို Post တင်ထားပြီး သူမရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲမှာလည်း စတိတ်စင်ပေါ်တက်ကာ သူ့ကို ပြန်လက်ခံပေးဖို့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းလောက်အောင် ပုရိသတ်များရှေ့မှာ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
Offset is displaying manipulative and abusive behavior towards Cardi B. He’s doing this in front ofacrowd and gaslighting the reasons she made her decision to leave bc of HIS behavior. My goodness. https://t.co/CdrL0pR9Uj
— DaBaby’s White Gold Grill ✨ (@BasicBlaecGirl) December 16, 2018
ထို့နောက် Cardi B က သူမအနေနဲ့ အခြေအနေကိစ္စရပ်တွေအားလုံးကို အဆင်ပြေချင်ကြောင်းနဲ့ သူမအတွက် အချိန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူမအနေနဲ့လည်း Offset ကို Social Media တွေပေါ်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပုတ်ခတ်တာတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက် ပုရိသတ်ကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous Liam Hemsworth ကို ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်လိုက်တဲ့ Miley Cyrus
Next ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ ကိုက်လန်ရွက်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်များ။